UMhlaza kunye neScorpio Ukuhambelana: ♥ Umdlalo Owenziwe eZulwini - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Oku kubhanqa yenye yezona midlalo zibalaseleyo kuzo zonke i-zodiac. Obu budlelwane buvumelana kakhulu kuba bumele ukudibana kweempawu ezimbini zaManzi, ezabelana ngokuhambelana okukhulu ngokweemvakalelo kunye nokuqondana. Zombini iimpawu zinobuntununtunu obuphantse bungaqondakali kunye nothando lwendalo lobomi. Banengqiqo, bazele luvelwano, kodwa banomona kakhulu! Kunjalo, olu manyano luya kuba lelona lihle iqabane ngalinye elakhe lafumana. Fumana iCancer kunye neScorpio ehambelanayo amanqaku kwaye ulungiselele ukumangaliswa!
'Umhlaza kunye neScorpio zigqibelele omnye komnye!'
Umhlaza kunye neScorpio ehambelanayo amanqaku: 5/5
Ezi zimbini Iimpawu zamanzi zenzelwe enye! Njengemiphefumlo enovelwano, enovelwano, enomdla kakhulu, ngokwendalo ikubude obufanayo! ubuntu Scorpio ngokwengqondo ihambelana nokuba nengqondo koMhlaza. Yintoni iCancer inikezela ngeScorpio kukukwazi ukuzola xa ujongene noxinzelelo. Ngothando, baziva bemanyene ngamandla omlingo. Ngokufuthi, baziva ngathi bamanyene, nto leyo enokuba ngumthwalo kancinane.
Ngaba aba babini baza kuphumelela ekuhambeni kwexesha?
Ewe banako! Umhlaza kunye neScorpio banayo kanye oko kuthatha ukugqiba ubomi bomnye nomnye kwaye ulwalamano lwabo ngokuqinisekileyo luya kuba lomlingo. Nangona, yabo Ukuba nomona nokubaphatha kakubi kunokubenza badimazeke kwaye ubagxothe. Xa iingxabano kunye nokungavisisani kuvela, ukuziphatha komntwana kweCancer kunokucaphukisa iScorpio, eya kuthi nayo iphendule ngokukrakra. Umthonyama weScorpio uyawuthanda kwaye uyawuqonda uMhlaza kakuhle kwaye ngokukhawuleza uguqula ukuqonda kwawo kubudlelwane bothando. Bayayazi indlela yokuhlangabezana neemvakalelo ezibuhlungu ngovelwano olukhulu kwaye banokuzinikela ngendlela emangalisayo. Olu phawu lunika uMhlaza ukhuseleko kunye nenkathalo abayinqwenelayo.
Inokuba yintoni ingxaki yesi sibini?
Bazi onobukhosi kunye nomona, ngoko kufuneka bazazi ukuba bamanyene. Ukuba akunjalo, uMhlaza, ngamanye amaxesha ongumntwana kwaye ohlabayo, unokuphosa umsindo kuScorpio oya kuziphindezela ngendlela enobundlongondlongo neyenzakalisayo. Kwaye njengeempawu ezilungileyo zaManzi, banokudlala kakuhle intlekele yamaGrike.
Funda ngakumbi malunga noku ngena 15 iinyani malunga Cancer -
Le yenye indawo apho IScorpio ihlala ikhokele indlela! Umhlaza, isithandwa esinentliziyo ethambileyo, siya kulandela i-eroticism yeScorpio, kwaye siya kwenza konke ukukholisa iqabane labo elithandekayo. IScorpio ngokuqinisekileyo naughtier ngaphezu Umhlaza kwigumbi lokulala, kodwa ukuba Umhlaza uziva ukhululekile, ngoko baya kulandela ngovuyo. Phakathi kwale miqondiso mibini i-eroticism ibuhlungu. Iintlobano zabo zesini zinamandla, ziphantse ukuba nomsindo, kodwa azinabuntununtunu. Ubudlelwane obusondeleyo buthatha inxaxheba ebalulekileyo kwesi sibini, akukho nto iphinda ihluze kwiindonga zegumbi lokulala.
Musa ukutshintsha nantoni na; umhle njengokuba unjalo! Intlonipho iya yimfuneko kwesi sibini apho iingxoxo zinokutsalwa khona. Kulumkele ukuya kude kakhulu ukuze ungazisoli ngesenzo okanye ngelizwi.
Yeyiphi imiqondiso yeZodiac emi-5 eyilize?
Kutheni Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Kudume Kangaka? 7 Izizathu zokuba